Yehowa Adansefo Bu Ayiyɛ Sɛn, Na nneɛma Bɛn Na Wɔyɛ Wɔ Wɔn Ayi Ase?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kachin Karen (S'gaw) Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tongan Tswana Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Yehowa Adansefo Bu Ayiyɛ Sɛn?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Yehowa Adansefo Bu Ayiyɛ Sɛn?
Ayiyɛ ho biribiara a yɛyɛ no, yɛde gyina Bible nkyerɛkyerɛ so. Ebi na edidi so yi:
Sɛ yɛn dɔfo bi wu a yedi awerɛhow. Yesu asuafo no sui bere a wɔn adɔfo wui no. (Yohane 11:33-35, 38; Asomafo Nnwuma 8:2; 9:39) Ɛno nti yemmu ayiyɛ sɛ ɛyɛ bere a yɛde gye yɛn ani. (Ɔsɛnkafo 3:1, 4; 7:1-4) Mmom, yebu no sɛ bere a yɛde kyekye wɔn a ade atɔ wɔn ani no werɛ.​—Romafo 12:15.
Obi wu a, na wawu. Amammerɛ anaa amanne bi wɔ hɔ a, ɛma yenya adwene sɛ obi wu a na onwui na obetumi aboa ateasefo anaasɛ wahaw wɔn. Ɛmfa ho abusua kõ a yefi mu ne yɛn amammerɛ no, yɛmfa yɛn ho nhyehyɛ amanne a ɛte saa mu, efisɛ Bible kasa tia. (Ɔsɛnkafo 9:5, 6, 10) Amanne no bi ne sɛ ebinom si funu ho pɛ, wɔyɛ ayi kokuroo de gye wɔn ani, wodi nea wawu no afe, wɔbɔ afɔre ma awufo, wɔne funu no kasa, anaa wobisa biribi fi nea wawu no hɔ. Ebi nso ne kunayɛ (amanne a wɔyɛ ma obi a ne kunu awu). Bible ka sɛ: “Montew mo ho, . . . na mommfa mo nsa nnka nea ɛho ntew.” (2 Korintofo 6:17) Wei nti yɛmfa yɛn ho nhyɛ amammerɛ ne amanne a ɛte saa mu.
Anidaso wɔ hɔ ma awufo. Bible no ma yehu sɛ bere bi bɛba a wobenyan awufo na wɔayi owu nso afi hɔ. (Asomafo Nnwuma 24:15; Adiyisɛm 21:4) Saa anidaso yi amma tete Kristofo no anni owu ho awerɛhow antra so. Anidaso koro no ara nti, yɛn nso yenni owu ho awerɛhow ntra so.​—1 Tesalonikafo 4:13.
Bible tu yɛn fo sɛ ɛnsɛ sɛ yɛhoahoa yɛn ho. (Mmebusɛm 11:2) Yennye nni sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ayi de ‘hoahoa yɛn ho’ de kyerɛ yɛn dibea anaa sika a yɛwɔ. (1 Yohane 2:16) Ɛno nti yɛnyɛ ayi konkuronn sɛ yɛde begyigye nkurɔfo ani. Afei nso, yensiesie yɛn ho ntra so na yɛntɔ funnaka akɛse a ne bo yɛ den mfa mpɛ anuonyam.
Nea yegye di fa ayiyɛ ho no, yɛmmfa mpuapua afoforo. Bible ka sɛ: “Yɛn mu biara bebu n’ankasa akontaa akyerɛ Onyankopɔn.” (Romafo 14:12) Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde saa nnyinasosɛm yi bɛyɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa yɛn gyidi mpuapua afoforo. Nanso, sɛ obi bisa yɛn ayiyɛ ho asɛm a, yefi “odwo ne obu a emu dɔ mu” kyerɛkyerɛ yɛn gyidi mu kyerɛ no.​—1 Petro 3:15.
Sɛn na Adansefo yɛ wɔn ayi?
Baabi a yɛyɛ ayi no: Sɛ abusua bi pɛ sɛ wɔyɛ ayi a, wɔn na wɔkyerɛ baabi a wɔbɛyɛ no. Wobetumi ayɛ ayi no wɔ Ahenni Asa so, baabi a wosiesie funu, efie, baabi a wɔhyew funu, anaa amusiei.
Ayi ho ɔkasa: Wɔma ɔkasa a egyina Bible so de kyerɛ tebea a awufo wom ne anidaso a awufo wɔ. Wei kyekye wɔn a wɔredi awerɛhow no werɛ. (Yohane 11:25; Romafo 5:12; 2 Petro 3:13) Nea ɔrema ɔkasa no betumi aka nea wawu no suban pa bi a na ɔwɔ ho asɛm ne sɛnea yebetumi asuasua ne nokwaredi.​—2 Samuel 1:17-27.
Wotumi to dwom a emu nsɛm fi Bible mu. (Kolosefo 3:16) Ɛno akyi no, wɔbɔ mpae a ɛka koma de wie dwumadi no.​—Filipifo 4:6, 7.
Kɔlɛhyen: Ɔsom mu dwumadi biara a yɛyɛ ma yɛn nkurɔfo no, yennye sika. Yɛyɛ ayi nso a, saa ara. Yɛn asafo nhyiam nso, yennye kɔlɛhyen.​—Mateo 10:8.
Wɔn a wobetumi aba bi: Sɛ yɛreyɛ ayi wɔ yɛn Ahenni Asa so a, wɔn a wɔnyɛ Adansefo betumi aba bi. Sɛnea obiara tumi ba yɛn nhyiam ahorow no, saa ara na sɛ yɛreyɛ ayi nso a, obiara betumi aba bi.
Sɛ ɔsom foforo bi reyɛ ayi a, Adansefo betumi akɔ bi anaa?
Asɛm yi de, Ɔdansefo biara begyina nea wasua afi Bible mu so asi n’ankasa gyinae. (1 Timoteo 1:19) Nanso, ɔsom mu amanne biara a yenim sɛ Bible kasa tia no, yɛmfa yɛn ho nhyem.​—2 Korintofo 6:14-17.
Sɛ obi wu a, ohu nea ɛkɔ so anaa?
Adɛn nti na Bible ka sɛ “owu wɔ ne bere”?
Share Share Yehowa Adansefo Bu Ayiyɛ Sɛn?
ijwfq asɛm 50
Dɛn Na Yehowa Adansefo Gye Di?